The 14+ Kuhle Kimimaro Izilinganiso Kusuka Naruto! (Ngezithombe) - Okunye
14+ Of The Inkumbulo Engakhohlakali Kakhulu Kimimaro Kusukela Naruto!
UKimimaro wayengumlingiswa onamandla o-jutsu wasebenzisa amathambo akhe njengesikhali. Wayengaphansi kobuholi bukaKabuto no-Orochimaru.
Ukufaneleka kukaKimimaro kuxhuma kuNaruto Uzumaki naseGaara kanye noRock Lee.
Nazi izingcaphuno zakhe ezinhle ezifanelwe ukwabiwa!
Izilinganiso ezinhle kakhulu zikaKimimaro ezivela kuNaruto:
“Ingabe ukhona ngempela unkulunkulu? Uma ekhona, kungani engivalela lapha? ” - UKimimaro
'Bengilokhu ngizibuza ... Kumele ngabe kunenhloso yokuthi abantu bazalwe kulo mhlaba. Kungani silapha? Kusho ukuthini? Bengilokhu ngicabanga ngakho kakhulu muva nje. Ngabona ukuthi ukuthola injongo yethu KUNGOKUYINCAZELO. Yingakho silapha. Futhi labo abakutholayo… Babodwa abakhululekile ngokweqiniso. ” - UKimimaro
“Ngimelana namandla entando… Amandla omzimba wami awalutho.” - UKimimaro
“Ukhetha muphi? Ukufa, noma ukulalela? ” - UKimimaro
i-anime ehamba phambili yohlu lonke lwesikhathi
“Angisona isikhwanyana sakhe ..! Nguye, ukuphela kwakhe owake wanikeza impilo yami injongo !! Kepha abanjengawe BANGAKUQONDA KANJANI LOKHO?!? ” - UKimimaro
“Ngizobona iqiniso laleli zwe… INKOSI U-OROCHIMARU UZONGIBONISA !!!” - UKimimaro
“O, impela kunodoti omningi osakazeke lapha. Kepha, udoti udoti nje phela. Kumane kudingeke ukuba ihlanzwe. ” - UKimimaro
'Uma uTayuya ebuya, ngizombulala.' - UKimimaro
“Angibuzondi ubumnyama. Ngakhuliswa ebumnyameni. ” - UKimimaro
kumele ubone i-anime ngaso sonke isikhathi
'Ngiyabona… njengoba ngingeke ngisaba yisitsha sika Lord Orochimaru, umsebenzi wami ukuvikela umkhumbi.' - UKimimaro
'Usubone omunye wemidanso yami kuphela.' - UKimimaro
“Ake ubone, ngingakubulala kanjani?” - UKimimaro
“Abantu… Ingabe abantu banenhloso lapho bezalwa? Bengilokhu ngizibuza muva nje. Ngoba bazelwe, ingabe banomsebenzi obalulekile? Incazelo yokuzalwa… Ukuze abantu bathole leyo mpendulo… Yile nkululeko uNkulunkulu ayinikeze yona. ” - UKimimaro
Izilinganiso eziyi-15 + ezinhle kakhulu ze-HAKU Frrom The Naruto Series
Izifundo Ezi-6 Ezimnyama U-Itachi Uchiha Wasifundisa Ngokuphila
kusho ukuthini ucezu lwempilo ku-anime
phezulu 10 anime enkulu kunazo zonke